Shirka hogaamiyayaasha Soomaaliya oo galay maalintii labaad | KEYDMEDIA ONLINE
Shirka hogaamiyayaasha Soomaaliya oo galay maalintii labaad
Waxaa maalintii labaad galay shir doceedka u dheexa hoggaamiyayaasha Soomaalida kaas oo ka socda xerada Xalane, loogana arrin sanayo xallinta caqabadaha hor taagan qabashada shir Madaxeedka rasmiga ah ee soo docda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shrka hordhaca ah ee Madaxda Dowladda Fadaraalka, Dowladaha Xubnaha ka ah iyo Gobolka Banaadir ee ka socda teendhada Afisyooni ayaa galay maalintiisii labaad, waxaana la filayaa in la soo gabagabeeyo maanta.
Qorshaha shirka oo ahaa inuu socdo kaliya hal maalin, ayaa lagu daray maalin kale oo dheeraad ah, si looga gudbo caqabadaha hor taagan shir madaxeedka rasmiga ah ee ay soo qaban qaabiyeen wakiillada Beesha Caalamka ee ku sugan Soomaaliya.
Kulankii shalay ayaa inta badan xoogga lagu saaray, dhageysiga iyo soo bandhiga tabashooyinka labada dhinac, waxaana si adag u hadlay Madaxweynayasha Maamulada Puntland iyo Jubbaland, Siciid Cabdullahi deni iyo Axmed Maxmed Islaam.
Inkastoo aan si buuxda bannaanka loo soo dhigin qodobadii shalay la isku afgartay, hadana kulanka maanta waxaa lagu jeexjeexi doonaa ajandaha shirka soo socda, iyo dhameystirka doodihii shalay.
Galinka danbe ee maanta ayaa la filayaa in la soo saaro war murtiyeed, la xariira, ajandaha guud ee loga doodi dono shirka wada-tashiga qaran, kaas oo la doonayo in lagu jaheeyo tubta doorashooyin loo dhan yahay.
Qodabada la isku hayo ee maanta la gorfeyn doono waxaa ugu muhiimsan afar qodob kuwaas oo kala ah;
Amniga guud ee Doorashooyinka Dalka.
Awoodda hay’adaha Dowladda ee waqtigu ka dhamaaday.
Ka qeyb galka shirka ee Saamileyda siyaaasadda.
Dhacdaii 19-kii Feebaraayo 2021 ka dhacday Muqdisho.
Waxaa dib loo dhigay, Saddex qodob oo kale, kuwaas oo la isla gartay in looga doodo shir weynaha, inkastoo horana looga soo hadlay shirkii Baydhabo ka dhacaay 16 Febaraayo 2021, Saddexdaan qodob ayaa kala ah;
Khilaafka ka taagan Gobolka Gedo.
Is-mari-waaga siyaasiyiinta Soomaaliland.
Muranka ka taagnaa Guddiga doorasha dadban.
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaao, oo dab badan ay aaminsan yihiin in uusan u socon qabashada doorasho xalaal aha ayaa hadda wajahaya cadaadis xooggan oo kaga imaanaya wakiillada Beesha Caalamka iyo guud ahaan daneeyayaasha siyaasadda Soomaalida.